Festival d’art urbain andiany fahadimy Afaka hanampy ireo ONG mandritra ny hetsika ireo mpanakanto
Hotanterahina eny amin’ny Fiat Galleria Behoririka manomboka ny 18 oktobra ho avy izao, haharitra 12 andro ilay hetsika “Festival d’Art Urbain” andiany fahadimy entina hanomezan-danja ny sora-drindrina.
Ankoatra ny fampirantiana ireo karazana asa tanana maro isan-karazany dia hisy ny fandraisan’ireo mpanakanto ireo karazana ONG mitaiza ankizy ôtista sy sahirana eto amintsika mandritra izany. Hatokan’izy ireo hanampiana ireny ONG ireny mantsy ny 20 %-n’ireo sangan’asa lafony hahafahana manampy ireo fikambanana mpanao asa soa ireny. Anisan’ny manohana akaiky ny hetsika ny Fiat, izay mpanokatra fiara vita avy any Italia tsy zoviana amintsika intsony. Nosafidiany hotohanana ny Festival d’Art Urbain noho ireto farany manome lanja ny zava-kanto.